"ကျွန်န်ုပ်နှင့် သရဲခြောက်သော ၀ါးရုံတော" ..! - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / "ကျွန်န်ုပ်နှင့် သရဲခြောက်သော ၀ါးရုံတော" ..!
"ကျွန်န်ုပ်နှင့် သရဲခြောက်သော ၀ါးရုံတော" ..!
Apann Pyay 8:53 AM ပရလောကအကြောင်း Edit
(၁) အချိန်ကာလကား လမိုက်ည သန်းခေါင်ယံ ။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အမှောင်ထုက တိတ်ဆိတ်စွာ ကြီးစိုးနေ၏ ။ နွေဦးပေါက်မို့ တစ်ချက်တစ်ချက် တိုက်ခတ်သော လေတိုးသံမှအပ မည်သည့်အသံမျှ မကြားရပေ ။ သက် ကယ်သောင် ရွာကလေးကား အမှောင်ထုအောက်ဝယ် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ တည်ရှိနေလေ၏ ။ ရွာတောင် ဖက်တွင်ရှိသော သင်္ချိုင်းကုန်းမှ ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူလိုက်သော ခွေးအူသံကြောင့် ခြောက်ခြားဖွယ် အလွန် ကောင်း လှပေ၏ ။ ထိုအခိုက် မပီဝိုးတ၀ါး လမိုက်ညတွင် မဲမဲသဏ္ဍာန်နှစ်ခုက ရွာတောင်ဖက် သင်္ချိုင်းအလည်မှ တရွေ့ ရွေ့သွားနေ၏ ။ သက်ကယ်သောင်ရွာနှင့် ရွာသင်္ချိုင်းကြားတွင် လွန်စွာရှည်လျှားသော ၀ါးရုံတော ကြီးတစ်ခု ရှိလေ၏ ။ ထိုဝါးရုံတောနှင့် ရွာကလေးကလည်း အတော်အလှမ်းဝေး၏ ။ မဲမဲသဏ္ဍာန်နှစ်ခုကား သင်္ချိုင်းကို လွန်မြောက်ပြီးနောက် ၀ါးရုံတောကြီးအောက်သို့ ရောက်ရှိလာ၏ ။ ကွမ်းတစ်ယာညက်ခန့် ကြာသော အခါ ၀ါးရုံတောကြီးသည် တဝေါဝေါမြည်ကာ သွက်သွက်ခါအောင် လှုပ်ယမ်းလာချေ၏ ။ ထိုသို့ ဖြစ်ပြီး မကြာမီမှာ ပင် မဲမဲသဏ္ဍာန်နှစ်ခုသည် သက်ကယ်သောင်ရွာဆီသို့ ပြေးထွက်သွားလေ၏ ။
” အလို ထွန်းခင်နဲ့ ညိုအေးတို့ပါလား ” ရွာလူကြီး ဦးအေးမောင်က လှမ်းမေးလိုက်သည် ။ ” ဟေ့ ဘာဖြစ်လာကြတာတုန်း ညကြီးမင်းကြီး အလန့်တကြားနဲ့ “ ” ဟို…ဟို…”
ထိုနှစ်ယောက်ကား ရုတ်တရက် ပြန်မဖြေနိုင်ရှာပေ ။ မောဟိုက်လွန်း၍ အသက်ကို မနဲ ရှုရှိုက်နေရ၏ ။ ” ကဲကဲ သူတို့ကို ရေတိုက်လိုက်ပါဦး ” အတော်ကြာအမော ဖြေစေပြီးမှ ထွန်းခင်က ” ဟို ဟို ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ကိုင်းဖိုးငွေတွေ သွားချေတာပါ အဲဒါ ရှစ်ဆိပ်ရွာကနေ အပြန် ရွာ သင်္ချိုင်း လည်း ဖြတ်ပြီးဝါးရုံတောလည်း ရောက်ရော ၀ါးရုံတောကြီးက လေမတိုက်ပဲနဲ့ တဝေါဝေါ မြည်လာတယ် ပြီးတော့ ၀ါးရုံ ပင်ကြီးတွေက ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်နောက်ကို လိုက်လာလို့ ကျွန်တော်တို့ အသက်လုပြီး ထွက်ပြေး လာရတာပါ “
” ဟေ.. ဟုတ်လို့လားကွာ ငါတို့ရွာမှာ ဒီလို အဖြစ်မျိုး တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး “ ရွာသားအားလုံး တအံ့တသြနှင့် အထိတ်တလန့် ဖြစ်ကုန်ကြ၏ ။ ” ဟယ် ၀ါးရုံတောက သရဲခြောက်တယ်တဲ့ အောင်မလေး “ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဆူညံကြကုန်၏ ။ ” ကဲကဲ ဒါဆိုလည်း လူစုပြီး ၀ါးရုံတောကို သွားကြည့်ကြရအောင်
“ ” ဟို …ဟို.. ကျွန်တော်တို့တော့ ပြန်မလိုက်ရဲကြတော့ဘူး “ “အေး မင်းတို့ နှစ်ယောက်နေခဲ့ ကျန်တဲ့ ကာလသားတွေ ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ “ သူကြီး ဦးအေးမောင် နောက်သို့ ကာလာသများ စုရုံးစုရုံးလိုက်သွားကြသည် ။
၀ါးရုံတောသို့အရောက် ခြေလှမ်း တိုင်း လိုလိုက နှေးသွားကြလေသည်။ အမှောင်ထုအောက်ဝယ် ၀ါးရုံတောကြီးကား မိစ္ဆာ ကောင်ကြီး ထိုင်နေ သည့် နှယ် ။ အချို့ ကားကြောက်လွန်း၍ မျက်စိမျက်နှာများပင် ပျက်၍ နေပေသည် ။ လူအုပ်ကြီးက ၀ါးရုံပင်ကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ စောင့်ကြည့်နေလေ၏ ။
တစ်နာရီခန့်ကြာသော် မည်သည့် ထူး ခြားမှုမှ မရှိသောကြောင့် ရွာသို့ ပြန်ခဲ့ကြလေသည် ။ နောက်တစ်နေ့ မနက်တွင် တစ်ရွာလုံးကား ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု နှင့် ၀ါးရုံတော သရဲအကြောင်းကား တောမီးပမာ ပျံ့နှံ့သွားလေတော့သည် ။
(၂) သရဲအခြောက်ခံရသော ထွန်းခင်နှင့် ညိုအေးတို့မှာလည်း အကြောက်လွန်ပြီး ကိုယ်တွေ ခြစ်ခြစ်တောက်ပူကာ ဆရာခေါ်၍ ကုသရလေသည် ။ ထိုသို့ဖြင့် အခြားရွာသို့ သွားစရာရှိလျှင် အခြာလမ်းမှ ပတ်သွားပြီး ၀ါးရုံတောနှင့် ရွာသင်္ချိုင်းကို ဖြတ်သော လမ်းမှာ တစတစ တိတ်ဆိတ် ခြောက်သွေ့လာလေသည် ။ မဖြစ်မနေ ကိစ္စရှိမှသာလျှင် ထိုလမ်းကို အသုံးပြုကြလေသည် ။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပွားပြီး ၂ ရက်ခန့်အကြာတွင် သက်ကယ်သောင်ရွာကလေးသို့ လူနှစ်ဦး ရောက်ရှိ လာ လေသည်။ တစ်ဦးကား အထူးကုဆရာဝန်လေး ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးကား ကျွန်ုပ်သက်တန့် ပင်ဖြစ်လေတော့သည် ။
ဒေါက်တာနိုင်ဇော်မှာ အသက် ၃၀ ခန့်ဝန်းကျင် အရပ်အမောင်း ထောင်ထောင် မောင်းမောင်းနှင့် လွန်စွာ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုးအစားကျလှသူ တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ သူသည် အထူးကု ဆရာဝန်ဘွဲ့ကြီးကို ယူထားသော်လည်း မြို့ကြီးပြကြီး တွင်မနေထိုင်ပဲ ကျေးလက်တောရွာများတွင် လှည့်လည် ဆေးကုသနေသော စေတနာ ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်လေသည် ။ ထို့အပြင်သူသည် လွန်စွာ ဗဟုသုတနှင့် ပြည့်စုံသကဲ့သို့ တိုက်ရိုက်ခိုက်ရည်နှင့် ပြည့်စုံသော စွန့်စားဝံ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပေသည် ။ သူ့တွင် လိုင်စင်နှင့်ကိုင်သော တောပစ်သေနတ်တစ်လက်လည်း ရှိပေသည် ။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအချိန်က သာမန် ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာနိုင်ဇော်နှင့် လွန်စွာ အတွဲညီလှသော ညီအစ်ကို ရင်းကဲ့သို့ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြလေသည် ။
ကျေးလက်တောရွာများတွင် လှည့်လည်ဆေးကုရင်း သက်ကယ်သောင်ရွာသို့ အရောက်တွင် လူနာနှစ်ဦးနှင့် ၀ါးရုံတောသရဲအကြောင်းက ဆီးကြိုနေလေသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးသည် ရွာသို့ရောက်ရောက်ခြင်း ရွာလူကြီး ဦးအေးမောင်ဆီသို့ အကျိုး အကြောင်း သွားပြော ပြလေသည် ။ ဦးအေးမောင်သည် ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းသိပြီးသောအခါ
” အဆင်သင့်လိုက်တာ ဆရာတို့ရယ် အခုတလော ရွာမှာ ဂြိုလ်ဝင်နေတယ်ဗျာ ၀ါးရုံတောသရဲအခြောက်ခံရတဲ့ နှစ်ယောက်ကလည်း သတိရတစ်ချက် မရတစ်ချက်နဲ့ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါဦး ဆရာရယ် “ ထိုသို့ပြောပြီး မကြာခင်မှာပင် ရွာသားတစ်ဦး အမောတကောနှင့် ပြေးဝင်လာလေသည် ။
” အင်း ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေဗျာ ဒီလူကတော့ အသက်သေဆုံးသွားပါပြီ ကဲ နောက်တစ်ယောက်ကို သွားကြည့် ရအောင်ဗျာ “ ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်မှ ပြောလိုက်သောကြောင့် ရွာသူကြီးက ညိုအေးအိမ်သို့ လိုက်ပို့ပေးလေသည် ။
အိမ်သို့ ရောက် သော် ညိုအေးမှာလည်း အခြေအနေမကောင်း ။ အဖျားတွေ တက်ကာ ကယောင်ကတမ်းဖြင့် ” သရဲ…သရဲ..အောင်မလေး ..ကြောက်ပါပြီဗျ” ဟူ၍ ညည်းငြူနေလေသည်။
ဒေါက်တာနိုင်ဇော်သည် လူနာကို အသေအချာစမ်းသပ်ပြီး ဆေးတစ်လုံးထိုးကာ သောက်ရမည့် ဆေးများပါ ပေးခဲ့လေသည် ။ ထို့နောက် အိမ်မှ ပြန်ဆင်းလာကာ သူကြီးကို ပြောပြီး ရွာထဲသို့ လှည့်လည်ခဲ့လေသည် ။ သက်ကယ်သောင်ရွာကား ရွာကြီးတစ်ရွာမဟုတ်သော်လည်း အတော်အသင့် ကြီးမားသော ရွာတစ်၇ွာ ဖြစ်လေ သည် ။ ရွာ၏ အနောက်ဖက်တွင် ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး ရှိပြီး တောင်ဖက်တွင် သင်္ချိုင်းကုန်း မြောက်ဖက်တွင် သီးနှံစိုက် ခင်းများနှင့် လွန်စွာ နေချင့်စဖွယ်ကောင်းသော ရွာတစ်ရွာပင် ဖြစ်လေသည် ။
ရွာကလေးမှာကား သရဲ ခြောက်ခံရပြီး တစ်ပါတ်အကြာတွင် တစ်ယောက် သေဆုံးသွားသည့်အတွက် ညနေစောင်းပင် ဖြစ်လင့်ကစား ရွာထဲဝယ် လူသွားလူလာမရှိသလောက် တိတ်ဆိတ်နေကြလေသည် ။ ထိုအခိုက် ကျွန်တော်တို့ရှေ့တွင် ငှက်ပျောပွဲ အုန်းပွဲများကို ခေါင်းပေါ်ရွက်၍ သွားနေကြသော လူတစ်စုကို တွေ့ရလေသည် ။ အကျိုး အကြောင်း မေးမြန်းကြည့်သော် ငှက်ပျောပွဲ ရွက်ထားသူမှာ နတ်ကတော် ဒေါ် စိန်ပုဆို သူဖြစ်ပြီး ထိုလူစုသည် ၀ါးရုံပင် သရဲကို ပူဇော်ရန်နှင့် ကွင်းပိုင်လယ်ပိုင်တို့ကို တောင်းပန်ရန်အတွက် ရွာတောင်ဖက် သို့ သွားနေ ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရလေသည် ။
ကျေးလက်တောရွာသူတောရွာသား များ၏ ယုံကြည်မှု ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦး လည်း ဘာမှ မပြောတော့ပဲ သူတို့အုပ်စုနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှနေ၍ ရွာတောင်ဖက်သို့ ထွက်လာ ခဲ့ တော့သည် ။ စကားတပြောပြောနှင့် ကွမ်းတယာညက်ခန့်အကြာတွင် သရဲခြောက်သည်ဟု လွန်စွာ နာမည်ကြီးသော ၀ါးရုံတော ကြီးဆီသို့ ရောက်ခဲ့လေတော့သည် ။ နေညိုချိန်မို့ လေတဖြူးဖြူးတိုက်ခတ်လျှက်ရှိရာ အလင်း ရောင်ရှိသော အချိန်တွင်ပင် ၀ါးရုံတောကြီးကား ဘယ်ညာယိမ်းနေသည်မှာ တစ္ဆေတစ်ကောင်နှင့် တူလှပေသည် ။ ရွာသား များသည် ၀ါးရုံတောနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် ရှိသော တောင်ဂမုလေးတစ်ခုတွင် ယူဆောင်လာသော ငှက် ပျောပွဲ အုန်းပွဲများကို တင်ပြီး ပူဇော်ပသကြလသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးလည်း တအောင့်မျှ အကဲခတ်ကာ တည်းခို ရာအိမ်သို့ ပြန်ခဲ့ကြလေတော့သည် ။
(၃) နောက်တစ်နေ့ နံနက်တွင် ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့် ဆတ်သားခြောက်ကို အဖန်ရေနှင့် လွေးနေခိုက် ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်က
ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်ုပ်သည် နံနက်စာစားခြင်းကို လတ်စသတ်လိုက်ပြီး ထမည်အပြုတွင် ” ဆရာ….ဆရာ ဟို… အဖေက ဟင်းပို့ခိုင်းလို့ပါ “ ” အော်..ဟုတ်ကဲ့..လာပြီခင်ဗျ “ အိမ်ရှေ့သို့ထွက်ကြည့်သောအခါ နွဲ့နှောင်းသော ကိုယ်ဟန်နှင့် မိန်းမပျို တစ်ဦးကို တွေ့ရလေသည် ။ ” ကျေးဇူးပဲနော်.. ဒါနဲ့ ညီမ အဖေက ဘယ်သူတုန်း “ ” ဦးအေးမောင်ပါ ဆရာ “ ” အော်.. သူကြီးကိုး.. ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောပေးပါခင်ဗျ “ ” ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ပြန်ခွင့်ပြုပါဦးဆရာ “ ” ဟုတ်ကဲ့ “ မိန်းမပျိုလေး ပြန်သွားပြီးနောက် ဒေါက်တာနိုင်ဇော်က ” ဘယ်သူတုန်း ကိုသက်တန့်ရ “ ” သူကြီးသမီးပါ ကိုနိုင်ဇော် ဟင်းလာပို့တာ ကဲ သွားကြရအောင် “ ဟု ကျွန်ုပ်က ပြောလိုက်ရာ ဒေါက်တာနိုင်ဇော်က လက်စွဲတော် သေနတ်ကို စွဲကာ နှစ်ဦးသား ထွက်ခဲ့ကြ လေ တော့ သည် ။
ရွာတောင်ဖက်ရှိ ၀ါးရုံတောသို့အရောက်တွင် ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်က ၀ါးရုံတော အောက်ခြေသို့ ဆင်းရန် ပြင်လေ သည် ။ ၀ါးရုံတော အောက်ခြေကား လူတရပ်မျှ ရှိသော ကိုင်းပင်များဖြင့် အုံ့ဆိုင်းလျှက်ရှိရာ အတွင်းသို့ ထိုး ဖောက်၍ မမြင်ရပေ ။ ” ဖြစ်ပါ့မလား ကိုနိုင်ဇော်ရ မြွေတွေဘာတွေ တွေ့မှဖြင့် “ ” အေးဗျ ကိုင်းပင်တွေက အတော့်ကို ထူတာပဲ ကျွန်တော်တော့ ဒီဝါးရုံတော အောက်ခြေမှာ လျှို့ဝှက်ချက် ရှိတယ် ထင်တယ်ဗျာ “ ” ကဲ ညရောက်မှ သရဲခြောက်မခြောက်လာ ကြည့်တာပေါ့ဗျာ အခုတောဝင်စို့ “ ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်ုပ်က ၀ါးရုံတော အလယ်တွင်လူတစ်ယောက်သွားနိုင်သော ခြုံလမ်းလေးထဲသို့ တိုးဝင် လိုက်လေသည် ။
၀ါးရုံတောနောက်တွင် ရိုးမတောအုပ်ကြီး တည်ရှိပြီး ၀ါးရုံတောကား တောအုပ်ကြီး အ၀င်ပေါက်ကို ပိတ်ထားသကဲ့သို့ ရှိလေသည် ။ ကျွန်ုပ်သည် ၀င်ပေါက်ကို သက်ကယ်သောင်ရွာရှိ မုဆိုးများထံမှ စနည်းနာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဆရာဝန် နှစ်ဦးကား လူ့အသက်ကို ကယ်ရသော အလုပ်ကို လုပ်ရ သော် လည်း အမဲလိုက်ခြင်းကိုမူ လွန်စွာ ၀ါသနာပါလေသည် ။ ( ကျွန်ုပ်နှင့် ဒေါက်တာနိုင်ဇော် တို့၏ တောတွင်း အတွေ့ အကြုံများကို နောင်အခါ ရေးသားပါဦးမည် ) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုန် ၊ မျောက် ၊ သမင်စသော အကောင်ငယ်လေးများကို တွေ့သော်လည်း ပစ်ခတ်ခြင်းမပြုပဲ တောနက်ထဲသို့ ဆက်၍ ၀င်ခဲ့ကြသည် ။ တောတွင်း တစ်နေရာ လျှိုမြောင်ကြီး ဆီသို့ အရောက်တွင် ဒေါက်တာနိုင်ဇော်က လက်ကာပြလိုက်၍ ကျွန်ုပ်လည်း ဒူးထောက်ထိုင်ချ လိုက်လေသည် ။ ” ကိုသက်တန့် ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေမကောင်းဘူးဗျ ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာ နှောကူးကြီး (ပြောင်) ရှိနေတယ် ကျွန်တော်တို့က လေညှာအောက်ရောက်နေတယ်ဟို ကုန်းမြင့်ပေါ်တက်နိုင်မှ ဖြစ်မယ်ဗျ လာလာ “ ဟုဆိုကာ ရှေ့မှ ဦးဆောင်၍ တက်သွားလေသည် ။ ကျွန်ုပ်မှာ ပြောင်သဘာဝကို သိပြီး ဖြစ်သည့် အလျောက် ဇော်ချွေး များ ပျံလာမိသည် ။ ပြောင်များသည် အနံ့ခံ ကောင်းသလောက် သင်းကွဲ ( အုပ်စုကွဲ ) ဆိုလျှင် တွေ့ရာ ဂမူးရှူး ထိုး ရန်မူတတ်ပေသည် ။ လေညှာတွင် ရှိသော သတ္တ၀ါကို အနံ့ခံအာရုံဖြင့် ခွဲခြားနိုင်စွမ်း ရှိလေသည် ။ တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ သစ်ပင်ကြီးအောက်သို့ ရောက်မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်လည်း အသက်ပြင်းပြင်း ရှူ နိုင်လေသည် ။ ဒေါက်တာနိုင်ဇော်မှာ ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်ကဲ့သို့ ငြိမ်သက်စွာ ဒူးထောက်ထိုင်နေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲ ခတ်နေသည် ။
ထိုအခိုက် စောစောက ကျွန်ုပ်တို့ ရပ်နေခဲ့သော နေရာသို့ ပြောင်ကြးက ၀င်လာနေသည် ။ ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်သည် တည်ငြိမ်စွာဖြင့် သေနတ်ကို ချိန်လိုက်ပြီး ပစ်ချလိုက်လေတော့သည် ။ ” ဒိုင်း “ ယမ်းပေါက်ကွဲသံကြီးကြောင့် တစ်တောလုံးရှိ ကျေးငှက်များ လန့်ဖြန့် ပျံကုန်ကြသည်။ ထိုအခိုက် ထူးဆန်းသော ဖြစ်ရပ်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် ကြုံရလေတော့သည် ။ ယင်းမှာ ပြောင်ကြီးသည် ချက်ကောင်းကို ထိပါလျှက်နှင့် လဲမကျ သွားသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ယောက်ကို တွေ့သွားပြီ ဖြစ်၍ တောင်ကုန်းပေါ်သို့ တဟုန်ထိုး ပြေး တက် လာလေသည် ။ ကျွန်ုပ်လည်း အသက်မျှပင် မရှုရဲပဲ မကြံတတ်အောင်ပင် ဖြစ်သွားလေသည် ။ ပြောင်ကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တဖြည်းဖြည်း နီးလာပေသည် ။ ထိုအခိုက် ဒေါက်တာနိုင်ဇော်ကို ကြည့်လိုက်ရာ စိတ်မပူသည့် အလား အေးအေးဆေးဆေးပင် ထိုင်နေလေသည် ။ ပြောင်ကြီးကား ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် သုံးကိုက်လောက် အကွာတွင် ဗုန်း ကနဲ လဲကျသွားပေတော့သည် ။ ထိုအခါမှ ကျွန်ုပ်လည်း အသက်ပြင်းပြင်း ရှူရဲလေတော့သည် ။
ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်က ” ဒီလို ရှိတယ် ကိုသက်တန့်ရ ပြောင်တွေက သွေးနွေးသတ္တ၀ါတွေထဲမှာ နာကျင်မှုဒါဏ်ကို အခံနိုင်ဆုံးနဲ့ ဒေါသအကြီးဆုံး အကောင်တွေပဲ စောစောက ကျွန်တော်ပစ်လိုက်တာက သူ့ရဲ့ လက်ဖျံရိုးအောက်တည့်တည့်ပဲ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ရန်မူမှန်းသိတော့ ဒီကောင်တွေက လတ်တလောဒါဏ်ရာကို မေ့သွားတယ်ဗျ ပြီးတော့ ရန်သူရှိ ရာကို ရန်ပြုဖို့ ပြေးလာတယ် ။ ဒါပေမယ့် နှလုံးကို ထိထားတဲ့ ဒါဏ်နဲ့ ကုန်းတက်ကြီးကို ဒင်း ငါးကိုက် လောက်အပြင် ပြေးမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာ “ ဟု ရှင်းပြလေသည် ။ ထိုအခါမှ ကျွန်တော်လည်း ဒေါက်တာနိုင်ဇော်၏ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပုံတို့ကို အသိအ မှတ်ပြုရလေတော့သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးလည်း ပြောင်ကြီးကို ၀ါးလုံးဖြင့် လျှိုထမ်း၍ ရွာသို့ ပြန်ကာ ရွာသား များအား ခွဲဝေပေးလိုက်လေတော့သည် ။
(၄) အကာလ ညအချိန်မို့ လူခြေက တိတ်ဆိတ်နေသည် ။ ထိုအချိန် ၀ါးရုံတောကြီးနှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိ သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်တွင် ဇွဲနဘဲကြီးစွာ စောင့်ဆိုင်းနေကြသူ နှစ်ဦးကား ဒေါက်တာနိုင်ဇော်နှင့် ကျွန်ုပ်ပင် ဖြစ် လေ သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့ကား ခြင်ကိုက်လည်း မရိုက်ရဲ အပေါ့အပါးလည်း မသွားရဲဘဲ ၀ါးရုံတောသို့သာ စူးစိုက် ကြည့်နေကြရသည် ။ နာရီပြန် ၂ ချက်ထိုးသောအခါ လူများကလည်း ငိုက်မျည်းစပြုလာသည် ။ ” ဆရာနိုင်ဇော်ရေ ဒီည သရဲက ခြောက်ပါ့မလားဗျ” ” အင်းအသေအချာတော့ မပြောနိုင်ဘူးဗျ စောင့်တော့ကြည့်ရမှာပဲ “ ထိုအခိုက် ” ဆရာ.. ဆရာ.. အဖေက ညဉ့်နက်နေပြီဆိုလို့ ဆရာတို့ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ ဆင်းလာပါဦး “ ဟု အော်သံကို ကြားရလေသည်။ အောက်သို့ငုံ့ကြည့်လိုက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဟင်းလာပေးသော သူကြီး သမီး ဖြစ်နေလေသည် ။ ကျွန်ုပ်က ပြန်ပြောမည်အပြုတွင် ဒေါက်တာနိုင်ဇော်က ” ရှူးတိုးတိုး ဆရာ ဘာမှ ပြန်မပြောနဲ့ ကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမယ် “ ဟုတည်ငြိမ်စွာ ပြောလေသည် ။
သစ်ပင်အောက်မှ မိန်းကလေးကလည်း လေးငါးခါလောက် အော်ခေါ်လေသည် ။ အတန်ကြာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ မဆင်းလာမှန်းသိသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးရှိရာသို့ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်ကာ အမှောင် ထုထဲ ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည် ။ ကျွန်ုပ်၏ ရင်ထဲတွင် အေးခဲသော လက်ကြီးနှင့် စွဲဆုပ် ထားဘိသကဲ့သို့ ခံစားလိုက်ရလေတော့သည် ။ ” ဒီလိုဆရာရဲ့ ဒီအချိန်ကြီးမှာ သူကြီးက သူ့သမီး မိန်းမပျိုလေးကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ နေရာကို လာခေါ်ခိုင်းပါ့မလား စဉ်းစားပါဦး နောက်ပြီး ဆရာသတိထားမိလား ဒီမိန်းမက လုံးဝမျက်တောင်မခတ်ဘူးဗျို့ အမှန်တော့ ဒီလို တောတွေမှာ တောခြောက်တာတွေ နာနာဘာဝတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကို ရမလားလို့ လှည့်စားတာပေါ့ဗျာ “ ဟုရှင်းပြလေသည် ။
ထိုအခါမှ ကျွန်ုပ်လည်း ကြက်သီးထမိသွားသည် ။ ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်မပါပဲ ကျွန်ုပ် တစ်ယောက်တည်းသာဆိုလျှင် ဆင်းသွားမိမှာ သေချာပေသည် ။ ထိုအခိုက် ၀ါးရုံတောကြီးကား တဟီးဟီး မြည် လာပြီး ယိမ်းထိုးလာလေသည် ။ ထူးဆန်းသည်မှာ ဘေးနားမှ သစ်ပင်များမှာ တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ် ။ ၀ါးရုံပင်များသာလျှင် သွက်သွက်ခါအောင် လှုပ်ခါနေခြင်းဖြစ်၏ ။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးလည်း သရဲခြောက်ခြင်းကို မယုံကြည် သူများ ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ မစဉ်းစားတတ်အောင် ဖြစ်ရလေ၏ ။ နာရီဝက်ခန့် လှုပ်ခါပြီးသောအခါ တ ဖြည်းဖြည်း ငြိမ်သက်သွားလေတော့သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဆက်လက်၍ ထူးခြားမှုများ မရှိတော့သောအခါ အောက် သို့ ဆင်းပြီး တည်းခိုရာ အိမ်သို့ ပြန်ခဲ့ကြလေတော့သည် ။
နံနက်ရောက်သောအခါ သူကြီးကို ညတုန်းက ကြုံခဲ့ရသည်များကို ပြန်၍ ပြောပြလိုက်ရာ သူကြီးဦးအေးမောင်မှာ လွန်စွာ ထိတ်လန့်အံ့သြလျှက်ရှိပြီး သူကြီးသမီးမှာ အံ့သြနေသော အမူအယာ ရှိလေသည် ။ သို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ သူငယ် ချင်း နှစ်ဦးလည်း မတွေးတတ်အောင်ပင် ရှိနေတော့သည် ။ ညတုန်းက အိပ်ရေးပျက်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးလည်း တည်းခိုရာအိမ် သို့ ပြန်ပြီး တရေးတမော အိပ်စက်ကြလေသည် ။ ညနေစောင်း ငါးနာ ရီအချိန်လောက်တွင် လူပေါင်း ၁၀ယောက် ခန့်ပါသော လူအုပ်ကြီးသည် ရွာလယ်လမ်းတလျောက် ဖုန် တ၀ုန်း ၀ုန်း ရှိအောင် သွားနေကြလေသည် ။ ထိုလူအုပ်ကြီး အလယ်တွင် လွန်စွာ သွေးစုပ်ဖြူလျော်လျှက်ရှိသော လူတစ်ဦးကို စောင်ပုခက်အတွက် သယ် ဆောင်လျှက် ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦး တည်းခိုရာ နေအိမ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာ ကြလေသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့လည်း အခြေ အနေကို မေးမြန်းကြည့်ရာ
ထိုသို့ ပြောလိုက်သောအခါ ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်က တစ်စုံတစ်ခုကို စဉ်းစားမိဟန်ဖြင့် အားရ၀မ်းသာစွာ ” ကဲဒါဆို ကျွန်တော်တို့ကို အဲဒီ သွေးတွေထွက်တဲ့ နေရာ လိုက်ပို့နိုင်မလားဗျာ ကျွန်တော့်မှာ သေနတ်လည်း ပါ ပါတယ် “ ” ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါ့မယ် “ သို့ဖြင့် ကိုဘအေး ၊ ဒေါက်တာ နိုင်ဇော် ၊ ကျွန်ုပ်နှင့် ရွာသား သုံးလေးယောက်တို့ ရွာ တောင်ဖက်သို့ ထွက်လာခဲ့ကြပေတော့သည် ။
(၅) ၀ါးရုံတောကြီး အလယ်တည့်တည့် ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးမတော ထဲ ၀င်သော အစပ်နားလောက်တွင် သွေးကွက်ကြီးကို ထင်ထင် ရှားရှား မြင်လိုက်ရပေသည် ။ သွေးများကား ၀ါးပင်နှုတ်သော နေရာမှ ထွက်နေဆဲပင် ရှိသေးသည် ။ ရွာသား များကား သို့လော သို့လောနှင့် အလွန်ပင် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လိုက်ရှိပေသည် ။ ဒေါက်တာနိုင်ဇော်ကား မှိုရသော မျက်နှာကဲ့သို့ အထူးပင် ၀မ်းသာလျှက် ရှိပေသည် ။ ” ဘယ့်နှယ့်တုန်း ကိုနိုင်ဇော်ရ ပြုံးလှချည်လား “ ” ဟဲဟဲ ပြုံးဆို အဖြေကို ကျွန်တော်သိပြီဗျ ဒါပေမယ့် ကျိန်းသေအောင်တော့ ကိုသက်တန့်ရယ် ကျွန်တော်ရယ် ဒီည စမ်းသပ်မှု တစ်ခု လုပ်ရလိမ့်မယ် “ ” ဟုတ်လား ကျွန်တော်ဖြင့်မ စဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲ ဗျာ “ ” ညရောက်ရင် ဒီသရဲ ဆိုတာကို ခင်ဗျား မျက်မြင်တွေ့ရပါစေ့မယ် ဗျာ…ဟားဟားဟား “ ဒေါက်တာနိုင်ဇော်ကို ကြည့်ရင်း ကျွန်ုပ်လည်း အတော်ပင် စိတ်အားတတ်သွားမိလေသည် ။
သို့နှင့်…. ၀ါးရုံတောကြီးကား အပ်ကျသံပင် ကြားရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလေသည် ။ ဟိုနားဒီနား ဖျက်ကနဲ တွေ့လိုက်ရသော အရိပ်များကား ကျွန်ုပ်ကို ခြောက်လှန့်လျက်ရှိသည် ။ နေ့လည်က တွေ့ခဲ့သော သွေး ကွက် များကား ခြောက်လျှက် ရှိပေသည် ။ ” ကျွန်တော်ယူခိုင်းလိုက်တာတွေ ပါရဲ့လား ကိုသက်တန့် “ ” ပါ ပါတယ်ဗျာ ဒီမှာ ရော့ “ ဒေါက်တာနိုင်ဇော်ကျွန်ုပ်ကို ယူဆောင်ခိုင်းသော ပစ္စည်းများမှာ ကောက်ရိုးခြောက် အနည်းငယ်နှင့် မီးခြစ်ပင် ဖြစ်ပေ သည် ။ ထို့နောက် ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်သည် ၀ါးရုံတော အောက်ခြေတွင် မီးပုံတစ်ခုကို ဖိုလေသည် ။ ထိုသို့ ဖိုပြီး မကြာခင်မှာပင် ၀ါးရုံတောကြီးကား သွက်သွက်ခါအောင် လှုပ်ယမ်းလာလေသည် ။ အခြားသစ်ပင်များကား မလှုပ်ပေ ။ ၀ါးပင်များသာလျှင် တစ်စုံတစ်ဦးက လှုပ်ယမ်းနေသကဲ့သို့ လှုပ်ခါနေခြင်းဖြစ်သည် ။
အတန်ကြာသောအခါ ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်က မီးပုံကို ငြိမ်းသတ်ပစ်လိုက်လေသည် ။ ထိုအခါ ၀ါးရုံတောကြီးကား တစ်စတစ်စ ပြန်လည် ငြိမ်သက်သွားလေတော့သည် ။ “ ဘယ်လို ဖြစ်တာတုန်း ကိုနိုင်ဇော်ရ ကျွန်တော်တော့ ဘာမှကို မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး “ ” ခင်ဗျားကို အဖြေမပြောခင် နောက်တစ်ခု ပြအုန်းမယ်ဗျ လာ “ ဟုဆိုကာ ၀ါးရုံတော အစပ်ရှိ ၀ါးပင်များရှိရာသို့ ဦးတည်လျောက်သွားလေသည် ။
” ဗျာ ဘယ်..ဘယ်လို “ ” ဒီလိုဗျ ဆရာ ကြားဖူးလား မသိဘူး ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ က သတ္တ၀ါကြီးတွေဟာ အလွန် အမင်းကြီး ထွားခဲ့ကြတယ် ဒါကြောင့် ကုန်းမှာ မြွေပွေး ရေမှာ ငရွေး ဆိုပြီး အဆိုရှိခဲ့ကြတယ်ဗျ ရေထဲမှာဆို ငရွေးဆိုတဲ့ ငါး ဟာ အကြီးဆုံးပဲ သူပြီးမှ ညံ သတ္တ၀ါတွေက အကြီးဆုံးပဲ မြေကြီးထဲမှာ ဆိုရင် ကုန်းနေသတ္တ၀ါတွေထဲမှာ ဆိုရင်ပေါ့ ဗျာ မြွေပွေးက အကြီးဆုံးပဲဗျ ဒီကောင်တွေက အစာစားပြီးတာနဲ့ တစ်နေရာရာမှာ နှစ်နဲ့ ချီပြီး ငြိမ်ငြိမ် လေး နေနေလေ့ ရှိတယ်ဗျ ရာသီဥတုတွေပြောင်းတော့ သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာ လေဒါဏ်မိုးဒါဏ်နဲ့ အလေ့ကျ အပင်တွေ ပေါက်လာတယ် မျှစ်စို့လေးတွေ လည်းပေါက်လာပြီး နောက်ပိုင်းကြီးလာတဲ့အခါ သူတို့ ကိုယ်က အသား တွေကို ဖောက်ပြီး ၀ါးရုံပင်တွေပေါက်လာတယ် ဒါပေမယ့်လည်း ဒီကောင်တွေက ငြိမ်နေတော့ မသိသာ ဘူးပေါ့ ဒါပေမယ့် ၀ါးရုံပင်ကို နှုတ်လိုက်တဲ့အခါ သူတို့ ကိုယ်ပေါ်က အသားတွေကို ဆွဲနှုတ်သလို ဖြစ်ပြီး သွေး တွေ ထွက်လာတာပဲဗျို့ ပြီးတော့ သူတို့ ကိုယ်ပေါ်ကိုမီးမွှေးတော့ အပူဒါဏ်ကြောင့် မြွေကြီး လှုပ်ရှား လိုက်တဲ့အခါ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ၀ါးရုံတောကြီးပါ လိုက်ပြီး လှုပ်လာတာပေါ့ဗျာ “ ” အော်.. လတ်စသတ်တော့ ဒီလိုကိုး ဒါဆို သူတို့ ခေါင်းကရောဗျာ “ ” ခေါင်းကတော့ တောတွင်းတစ်နေရာမှာ ရှိမှာပေါ့ဗျာ “ ” အော်…” သို့နှင့် ကျွန်ုပ်ရင်ထဲက ပုစ္ဆာလည်းဒေါက်တာ နိုင်ဇော် အဖြေကြောင့် ရှင်းလင်းသွားရလေတော့သည် ။
(၆) နောက်တစ်နေ့ နံနက်တွင် ရွာသားများအား သူကြီးအိမ်တွင် စုနေစေပြီး အဖြေကို ပြောပြလိုက်လေသည် ။ ရွာသား များမှာ အံ့သြလွန်း၍ မျက်တောင်ပင် မခတ်ကြပေ ။ ပြီးနောက် ” တော်သေးတာပေါ့ ဆရာရယ် ဆရာတို့လို ဗဟုသုတကြွယ်ဝလူမို့သာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ ဖြင့် သရဲ ခြောက် တယ်ပဲ ထင်နေတာဗျာ ဒါနဲ့ ဒီမြွေကြီးကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဗျာ “ ” ဒီလို ရှိတယ်ဗျာ ဒီကောင်ကြီး ငြိမ်နေတုန်းတော့ အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်လို့ ဗိုက်ဆာလို့ လှုပ်ရှား လိုက်ရင်ဒီရွာကလေးလည်း ပျက်သွားနိုင်တယ် ဒီတော့ ဒီကောင်ကြီးကို ရှင်းပစ်ရမယ်ဗျာ ရှင်းရမယ့် နည်းလမ်းကတော့ အခု ဒီရွာရဲ့ ဘေးက ခမာ တောင်ခြေမှာ ရထားလမ်းဖောက်ဖို့ တောင်တွေ ဖြိုနေကြတယ် ။ သူတို့ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဒီကောင်ကြီးကို မိုင်းနဲ့ ရှင်းပစ်ရမှာပဲ “ ” အေးဗျာ ဆရာရဲ့ အကြံကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ ဒီကောင်ကြီးက သူ့ဘာသာနေတဲ့အတွက် ရက်စက်ရာ ကျပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးလေ တချိန်လူတွေ ဒုက္ခမရောက်ဖို့အတွက် ရှင်းပစ်ရမှာပဲ ဆရာရေ “ ဒီလိုနဲ့ ရွာသူကြီး ဦးအေးမောင် နဲ့ ရပ်ရွာလူကြီးများ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦး ပေါင်းပြီး မိုင်းလုပ်သားများကို သွား၍ အကူ အညီတောင်းကြလေသည် ။ ရထားလမ်းအလုပ်သမားများကလည်း အထက်လူကြီးကို တင်ပြပြီး အကူအညီပေးလေသည် ။ သို့နှင့် သက်ကယ် သောင်ရွာ ကလေးတွင် ရွာသူရွာသားများအား ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့သော မြွေကြီးအား မိုင်းခွဲ၍ ရှင်းပစ် လိုက်လေတော့သည် ။ ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦး၏ စိတ်ထဲတွင်ကား သူ့ဘာသာနေသော မြွေကြီးအား တမင်တကာ သတ်ဖြတ်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သော်လည်း နောင်တစ်ချိန် ရွာသူရွာသူများ၏ အသက်ပေါင်းများစွာနှင့် ပတ်သည် နေသည်ဖြစ်သောကြောင့် သာ သတ်ဖြတ်ရခြင်း ဖြစ်သည်မို့ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်ရလေတော့သတည်း ။
Credit: မြန်မာ သရဲဇာတ်လမ်းများနှင့် ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ဇာတ်လမ်းများ စုစည်းမှု
(၁) အခြိနျကာလကား လမိုကျည သနျးခေါငျယံ ။ ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံး အမှောငျထုက တိတျဆိတျစှာ ကွီးစိုးနေ၏ ။ နှဦေးပေါကျမို့ တဈခကျြတဈခကျြ တိုကျခတျသော လတေိုးသံမှအပ မညျသညျ့အသံမြှ မကွားရပေ ။ သကျ ကယျသောငျ ရှာကလေးကား အမှောငျထုအောကျဝယျ တိတျဆိတျငွိမျသကျစှာ တညျရှိနလေေ၏ ။ ရှာတောငျ ဖကျတှငျရှိသော သင်ျခြိုငျးကုနျးမှ ဆှဲဆှဲငငျငငျ အူလိုကျသော ခှေးအူသံကွောငျ့ ခွောကျခွားဖှယျ အလှနျ ကောငျး လှပေ၏ ။ ထိုအခိုကျ မပီဝိုးတဝါး လမိုကျညတှငျ မဲမဲသဏ်ဍာနျနှဈခုက ရှာတောငျဖကျ သင်ျခြိုငျးအလညျမှ တရှေ့ ရှသှေ့ားနေ၏ ။ သကျကယျသောငျရှာနှငျ့ ရှာသင်ျခြိုငျးကွားတှငျ လှနျစှာရှညျလြှားသော ဝါးရုံတော ကွီးတဈခု ရှိလေ၏ ။ ထိုဝါးရုံတောနှငျ့ ရှာကလေးကလညျး အတျောအလှမျးဝေး၏ ။ မဲမဲသဏ်ဍာနျနှဈခုကား သင်ျခြိုငျးကို လှနျမွောကျပွီးနောကျ ဝါးရုံတောကွီးအောကျသို့ ရောကျရှိလာ၏ ။ ကှမျးတဈယာညကျခနျ့ ကွာသော အခါ ဝါးရုံတောကွီးသညျ တဝေါဝေါမွညျကာ သှကျသှကျခါအောငျ လှုပျယမျးလာခြေ၏ ။ ထိုသို့ ဖွဈပွီး မကွာမီမှာ ပငျ မဲမဲသဏ်ဍာနျနှဈခုသညျ သကျကယျသောငျရှာဆီသို့ ပွေးထှကျသှားလေ၏ ။
” ကယျကွပါဦးဗြို့… ကယျကွပါဦး.. သ…သရဲ ခွောကျလို့ဗြို့ “
အမောတကော ပွေးဝငျလာပွီး အျောဟဈနကွေသော အသံမြားကွောငျ့ တဈရှာလုံးလိုလို နိုးလာလသေညျ ။ ထို့ နောကျ မီးအိမျလေးတှကေိုငျပွီး ရှာလယျလမျးမသို့ ထှကျလာကွ၏ ။
” အလို ထှနျးခငျနဲ့ ညိုအေးတို့ပါလား ” ရှာလူကွီး ဦးအေးမောငျက လှမျးမေးလိုကျသညျ ။ ” ဟေ့ ဘာဖွဈလာကွတာတုနျး ညကွီးမငျးကွီး အလနျ့တကွားနဲ့ “ ” ဟို…ဟို…”
ထိုနှဈယောကျကား ရုတျတရကျ ပွနျမဖွနေိုငျရှာပေ ။ မောဟိုကျလှနျး၍ အသကျကို မနဲ ရှုရှိုကျနရေ၏ ။ ” ကဲကဲ သူတို့ကို ရတေိုကျလိုကျပါဦး ” အတျောကွာအမော ဖွစေပွေီးမှ ထှနျးခငျက ” ဟို ဟို ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျက ကိုငျးဖိုးငှတှေေ သှားခတြောပါ အဲဒါ ရှဈဆိပျရှာကနေ အပွနျ ရှာ သင်ျခြိုငျး လညျး ဖွတျပွီးဝါးရုံတောလညျး ရောကျရော ဝါးရုံတောကွီးက လမေတိုကျပဲနဲ့ တဝေါဝေါ မွညျလာတယျ ပွီးတော့ ဝါးရုံ ပငျကွီးတှကေ ကြှနျတျောတို့ နှဈယောကျနောကျကို လိုကျလာလို့ ကြှနျတျောတို့ အသကျလုပွီး ထှကျပွေး လာရတာပါ “
” ဟေ.. ဟုတျလို့လားကှာ ငါတို့ရှာမှာ ဒီလို အဖွဈမြိုး တဈခါမှ မကွားဖူးပါဘူး “ ရှာသားအားလုံး တအံ့တသွနှငျ့ အထိတျတလနျ့ ဖွဈကုနျကွ၏ ။ ” ဟယျ ဝါးရုံတောက သရဲခွောကျတယျတဲ့ အောငျမလေး “ တဈယောကျတဈပေါကျဆူညံကွကုနျ၏ ။ ” ကဲကဲ ဒါဆိုလညျး လူစုပွီး ဝါးရုံတောကို သှားကွညျ့ကွရအောငျ
“ ” ဟို …ဟို.. ကြှနျတျောတို့တော့ ပွနျမလိုကျရဲကွတော့ဘူး “ “အေး မငျးတို့ နှဈယောကျနခေဲ့ ကနျြတဲ့ ကာလသားတှေ ငါနဲ့လိုကျခဲ့ “ သူကွီး ဦးအေးမောငျ နောကျသို့ ကာလာသမြား စုရုံးစုရုံးလိုကျသှားကွသညျ ။
ဝါးရုံတောသို့အရောကျ ခွလှေမျး တိုငျး လိုလိုက နှေးသှားကွလသေညျ။ အမှောငျထုအောကျဝယျ ဝါးရုံတောကွီးကား မိစ်ဆာ ကောငျကွီး ထိုငျနေ သညျ့ နှယျ ။ အခြို့ ကားကွောကျလှနျး၍ မကျြစိမကျြနှာမြားပငျ ပကျြ၍ နပေသေညျ ။ လူအုပျကွီးက ဝါးရုံပငျကို တိတျဆိတျငွိမျသကျစှာ စောငျ့ကွညျ့နလေေ၏ ။
တဈနာရီခနျ့ကွာသျော မညျသညျ့ ထူး ခွားမှုမှ မရှိသောကွောငျ့ ရှာသို့ ပွနျခဲ့ကွလသေညျ ။ နောကျတဈနေ့ မနကျတှငျ တဈရှာလုံးကား ဟိုတဈစု ဒီတဈျစု နှငျ့ ဝါးရုံတော သရဲအကွောငျးကား တောမီးပမာ ပြံ့နှံ့သှားလတေော့သညျ ။
(၂) သရဲအခွောကျခံရသော ထှနျးခငျနှငျ့ ညိုအေးတို့မှာလညျး အကွောကျလှနျပွီး ကိုယျတှေ ခွဈခွဈတောကျပူကာ ဆရာချေါ၍ ကုသရလသေညျ ။ ထိုသို့ဖွငျ့ အခွားရှာသို့ သှားစရာရှိလြှငျ အခွာလမျးမှ ပတျသှားပွီး ဝါးရုံတောနှငျ့ ရှာသင်ျခြိုငျးကို ဖွတျသော လမျးမှာ တစတစ တိတျဆိတျ ခွောကျသှလေ့ာလသေညျ ။ မဖွဈမနေ ကိစ်စရှိမှသာလြှငျ ထိုလမျးကို အသုံးပွုကွလသေညျ ။
အထကျပါအဖွဈအပကျြမြားဖွဈပှားပွီး ၂ ရကျခနျ့အကွာတှငျ သကျကယျသောငျရှာကလေးသို့ လူနှဈဦး ရောကျရှိ လာ လသေညျ။ တဈဦးကား အထူးကုဆရာဝနျလေး ဒေါကျတာ နိုငျဇျောဖွဈပွီး ကနျြတဈဦးကား ကြှနျုပျသကျတနျ့ ပငျဖွဈလတေော့သညျ ။
ဒေါကျတာနိုငျဇျောမှာ အသကျ ၃၀ ခနျ့ဝနျးကငျြ အရပျအမောငျး ထောငျထောငျ မောငျးမောငျးနှငျ့ လှနျစှာ ကိုယျခန်ဓာ အခြိုးအစားကလြှသူ တဈဦးဖွဈလသေညျ။ သူသညျ အထူးကု ဆရာဝနျဘှဲ့ကွီးကို ယူထားသျောလညျး မွို့ကွီးပွကွီး တှငျမနထေိုငျပဲ ကြေးလကျတောရှာမြားတှငျ လှညျ့လညျ ဆေးကုသနသေော စတေနာ ဆရာဝနျတဈဦး ဖွဈလသေညျ ။ ထို့အပွငျသူသညျ လှနျစှာ ဗဟုသုတနှငျ့ ပွညျ့စုံသကဲ့သို့ တိုကျရိုကျခိုကျရညျနှငျ့ ပွညျ့စုံသော စှနျ့စားဝံ့သူ တဈဦးလညျး ဖွဈပသေညျ ။ သူ့တှငျ လိုငျစငျနှငျ့ကိုငျသော တောပဈသနေတျတဈလကျလညျး ရှိပသေညျ ။ ကြှနျုပျသညျ ထိုအခြိနျက သာမနျ ဆရာဝနျတဈဦး ဖွဈပွီး ဒေါကျတာနိုငျဇျောနှငျ့ လှနျစှာ အတှဲညီလှသော ညီအဈကို ရငျးကဲ့သို့ သူငယျခငျြးမြား ဖွဈကွလသေညျ ။
ကြေးလကျတောရှာမြားတှငျ လှညျ့လညျဆေးကုရငျး သကျကယျသောငျရှာသို့ အရောကျတှငျ လူနာနှဈဦးနှငျ့ ဝါးရုံတောသရဲအကွောငျးက ဆီးကွိုနလေသေညျ ။ ကြှနျုပျတို့ နှဈဦးသညျ ရှာသို့ရောကျရောကျခွငျး ရှာလူကွီး ဦးအေးမောငျဆီသို့ အကြိုး အကွောငျး သှားပွော ပွလသေညျ ။ ဦးအေးမောငျသညျ ကြှနျတျောတို့ အကွောငျးသိပွီးသောအခါ
” အဆငျသငျ့လိုကျတာ ဆရာတို့ရယျ အခုတလော ရှာမှာ ဂွိုလျဝငျနတေယျဗြာ ဝါးရုံတောသရဲအခွောကျခံရတဲ့ နှဈယောကျကလညျး သတိရတဈခကျြ မရတဈခကျြနဲ့ တဈခကျြလောကျကွညျ့ပါဦး ဆရာရယျ “ ထိုသို့ပွောပွီး မကွာခငျမှာပငျ ရှာသားတဈဦး အမောတကောနှငျ့ ပွေးဝငျလာလသေညျ ။
” သူကွီး သူကွီး ကိုထှနျးခငျကွီး ဆုံးသှားလို့ တဲ့ အဲဒါသူကွီးကို လာအကွောငျးကွားတာပါ “
” ဟေ ဖွဈရလကှော ကဲ ကဲ ..ဆရာ တို့လညျး ရှိတုနျး တခကျြလောကျ ကွညျ့ပေးပါဦး ဗြာ “
သို့ဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ နှဈဦးကား သူကွီးနှငျ့အတူ ထှကျလာခဲ့ကွတော့သညျ ။ အိမျတဈအိမျအရောကျတှကျ ရှိလသေညျ ။ အိမျပျေါသို့ တကျကွညျ့သျော ထှနျးခငျဆိုသူကား အသကျသဆေုံးနပွေီ ဖွဈလသေညျ ။ ကွောကျ မကျဖှယျရာ တဈခုခုကို ကွုံတှပွေီ့း မအိပျနိုငျမစားနိုငျနှငျ့ စိတျခွောကျခွားကာ အသကျသဆေုံးခွငျးပငျ ဖွဈလေ သညျ ။
” အငျး ဖွဈမှ ဖွဈရလဗြော ဒီလူကတော့ အသကျသဆေုံးသှားပါပွီ ကဲ နောကျတဈယောကျကို သှားကွညျ့ ရအောငျဗြာ “ ဒေါကျတာ နိုငျဇျောမှ ပွောလိုကျသောကွောငျ့ ရှာသူကွီးက ညိုအေးအိမျသို့ လိုကျပို့ပေးလသေညျ ။
အိမျသို့ ရောကျ သျော ညိုအေးမှာလညျး အခွအေနမေကောငျး ။ အဖြားတှေ တကျကာ ကယောငျကတမျးဖွငျ့ ” သရဲ…သရဲ..အောငျမလေး ..ကွောကျပါပွီဗြ” ဟူ၍ ညညျးငွူနလေသေညျ။
ဒေါကျတာနိုငျဇျောသညျ လူနာကို အသအေခြာစမျးသပျပွီး ဆေးတဈလုံးထိုးကာ သောကျရမညျ့ ဆေးမြားပါ ပေးခဲ့လသေညျ ။ ထို့နောကျ အိမျမှ ပွနျဆငျးလာကာ သူကွီးကို ပွောပွီး ရှာထဲသို့ လှညျ့လညျခဲ့လသေညျ ။ သကျကယျသောငျရှာကား ရှာကွီးတဈရှာမဟုတျသျောလညျး အတျောအသငျ့ ကွီးမားသော ရှာတဈရှာ ဖွဈလေ သညျ ။ ရှာ၏ အနောကျဖကျတှငျ ဧရာဝတီ မွဈကွီး ရှိပွီး တောငျဖကျတှငျ သင်ျခြိုငျးကုနျး မွောကျဖကျတှငျ သီးနှံစိုကျ ခငျးမြားနှငျ့ လှနျစှာ နခေငျြ့စဖှယျကောငျးသော ရှာတဈရှာပငျ ဖွဈလသေညျ ။
ရှာကလေးမှာကား သရဲ ခွောကျခံရပွီး တဈပါတျအကွာတှငျ တဈယောကျ သဆေုံးသှားသညျ့အတှကျ ညနစေောငျးပငျ ဖွဈလငျ့ကစား ရှာထဲဝယျ လူသှားလူလာမရှိသလောကျ တိတျဆိတျနကွေလသေညျ ။ ထိုအခိုကျ ကြှနျတျောတို့ရှတှေ့ငျ ငှကျပြောပှဲ အုနျးပှဲမြားကို ခေါငျးပျေါရှကျ၍ သှားနကွေသော လူတဈစုကို တှရေ့လသေညျ ။ အကြိုး အကွောငျး မေးမွနျးကွညျ့သျော ငှကျပြောပှဲ ရှကျထားသူမှာ နတျကတျော ဒျေါ စိနျပုဆို သူဖွဈပွီး ထိုလူစုသညျ ဝါးရုံပငျ သရဲကို ပူဇျောရနျနှငျ့ ကှငျးပိုငျလယျပိုငျတို့ကို တောငျးပနျရနျအတှကျ ရှာတောငျဖကျ သို့ သှားနေ ခွငျးဖွဈ ကွောငျး သိရလသေညျ ။
ကြေးလကျတောရှာသူတောရှာသား မြား၏ ယုံကွညျမှု ဖွဈသောကွောငျ့ ကြှနျုပျတို့ နှဈဦး လညျး ဘာမှ မပွောတော့ပဲ သူတို့အုပျစုနှငျ့ မလှမျးမကမျးမှနေ၍ ရှာတောငျဖကျသို့ ထှကျလာ ခဲ့ တော့သညျ ။ စကားတပွောပွောနှငျ့ ကှမျးတယာညကျခနျ့အကွာတှငျ သရဲခွောကျသညျဟု လှနျစှာ နာမညျကွီးသော ဝါးရုံတော ကွီးဆီသို့ ရောကျခဲ့လတေော့သညျ ။ နညေိုခြိနျမို့ လတေဖွူးဖွူးတိုကျခတျလြှကျရှိရာ အလငျး ရောငျရှိသော အခြိနျတှငျပငျ ဝါးရုံတောကွီးကား ဘယျညာယိမျးနသေညျမှာ တစ်ဆတေဈကောငျနှငျ့ တူလှပသေညျ ။ ရှာသား မြားသညျ ဝါးရုံတောနှငျ့ ခပျလှမျးလှမျးတှငျ ရှိသော တောငျဂမုလေးတဈခုတှငျ ယူဆောငျလာသော ငှကျ ပြောပှဲ အုနျးပှဲမြားကို တငျပွီး ပူဇျောပသကွလသညျ ။ ကြှနျုပျတို့ နှဈဦးလညျး တအောငျ့မြှ အကဲခတျကာ တညျးခို ရာအိမျသို့ ပွနျခဲ့ကွလတေော့သညျ ။
(၃) နောကျတဈနေ့ နံနကျတှငျ ကောကျညှငျးပေါငျးနှငျ့ ဆတျသားခွောကျကို အဖနျရနှေငျ့ လှေးနခေိုကျ ဒေါကျတာ နိုငျဇျောက
” ကိုသကျတနျ့ရေ.. ကြှနျတျောတို့ တောလညျကွရအောငျ ဝါးရုံတောသရဲ အကွောငျးလညျး စုံစမျးရငျးနဲ့ပေါ့ ဘယျ့ နှယျ့ လညျး မကောငျးဘူးလား “
” ကောငျးသားပဲ ကိုနိုငျဇျောရသှားရအောငျလေ အမဲ မပဈရတာလညျး ကွာပေါ့ “
ပွောပွောဆိုဆို ကြှနျုပျသညျ နံနကျစာစားခွငျးကို လတျစသတျလိုကျပွီး ထမညျအပွုတှငျ ” ဆရာ….ဆရာ ဟို… အဖကေ ဟငျးပို့ခိုငျးလို့ပါ “ ” အျော..ဟုတျကဲ့..လာပွီခငျဗြ “ အိမျရှသေို့ထှကျကွညျ့သောအခါ နှဲ့နှောငျးသော ကိုယျဟနျနှငျ့ မိနျးမပြို တဈဦးကို တှရေ့လသေညျ ။ ” ကြေးဇူးပဲနျော.. ဒါနဲ့ ညီမ အဖကေ ဘယျသူတုနျး “ ” ဦးအေးမောငျပါ ဆရာ “ ” အျော.. သူကွီးကိုး.. ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ ပွောပေးပါခငျဗြ “ ” ဟုတျကဲ့ရှငျ့ ပွနျခှငျ့ပွုပါဦးဆရာ “ ” ဟုတျကဲ့ “ မိနျးမပြိုလေး ပွနျသှားပွီးနောကျ ဒေါကျတာနိုငျဇျောက ” ဘယျသူတုနျး ကိုသကျတနျ့ရ “ ” သူကွီးသမီးပါ ကိုနိုငျဇျော ဟငျးလာပို့တာ ကဲ သှားကွရအောငျ “ ဟု ကြှနျုပျက ပွောလိုကျရာ ဒေါကျတာနိုငျဇျောက လကျစှဲတျော သနေတျကို စှဲကာ နှဈဦးသား ထှကျခဲ့ကွ လေ တော့ သညျ ။
ရှာတောငျဖကျရှိ ဝါးရုံတောသို့အရောကျတှငျ ဒေါကျတာ နိုငျဇျောက ဝါးရုံတော အောကျခွသေို့ ဆငျးရနျ ပွငျလေ သညျ ။ ဝါးရုံတော အောကျခွကေား လူတရပျမြှ ရှိသော ကိုငျးပငျမြားဖွငျ့ အုံ့ဆိုငျးလြှကျရှိရာ အတှငျးသို့ ထိုး ဖောကျ၍ မမွငျရပေ ။ ” ဖွဈပါ့မလား ကိုနိုငျဇျောရ မွှတှေဘောတှေ တှမှေ့ဖွငျ့ “ ” အေးဗြ ကိုငျးပငျတှကေ အတေျာ့ကို ထူတာပဲ ကြှနျတျောတော့ ဒီဝါးရုံတော အောကျခွမှော လြှို့ဝှကျခကျြ ရှိတယျ ထငျတယျဗြာ “ ” ကဲ ညရောကျမှ သရဲခွောကျမခွောကျလာ ကွညျ့တာပေါ့ဗြာ အခုတောဝငျစို့ “ ပွောပွောဆိုဆို ကြှနျုပျက ဝါးရုံတော အလယျတှငျလူတဈယောကျသှားနိုငျသော ခွုံလမျးလေးထဲသို့ တိုးဝငျ လိုကျလသေညျ ။
ဝါးရုံတောနောကျတှငျ ရိုးမတောအုပျကွီး တညျရှိပွီး ဝါးရုံတောကား တောအုပျကွီး အဝငျပေါကျကို ပိတျထားသကဲ့သို့ ရှိလသေညျ ။ ကြှနျုပျသညျ ဝငျပေါကျကို သကျကယျသောငျရှာရှိ မုဆိုးမြားထံမှ စနညျးနာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ကြှနျုပျတို့ ဆရာဝနျ နှဈဦးကား လူ့အသကျကို ကယျရသော အလုပျကို လုပျရ သျော လညျး အမဲလိုကျခွငျးကိုမူ လှနျစှာ ဝါသနာပါလသေညျ ။ ( ကြှနျုပျနှငျ့ ဒေါကျတာနိုငျဇျော တို့၏ တောတှငျး အတှေ့ အကွုံမြားကို နောငျအခါ ရေးသားပါဦးမညျ ) ။
ကြှနျုပျတို့သညျ ယုနျ ၊ မြောကျ ၊ သမငျစသော အကောငျငယျလေးမြားကို တှသေ့ျောလညျး ပဈခတျခွငျးမပွုပဲ တောနကျထဲသို့ ဆကျ၍ ဝငျခဲ့ကွသညျ ။ တောတှငျး တဈနရော လြှိုမွောငျကွီး ဆီသို့ အရောကျတှငျ ဒေါကျတာနိုငျဇျောက လကျကာပွလိုကျ၍ ကြှနျုပျလညျး ဒူးထောကျထိုငျခြ လိုကျလသေညျ ။ ” ကိုသကျတနျ့ ကြှနျတျောတို့ အခွအေနမေကောငျးဘူးဗြ ဒီနားတဈဝိုကျမှာ နှောကူးကွီး (ပွောငျ) ရှိနတေယျ ကြှနျတျောတို့က လညှောအောကျရောကျနတေယျဟို ကုနျးမွငျ့ပျေါတကျနိုငျမှ ဖွဈမယျဗြ လာလာ “ ဟုဆိုကာ ရှမှေ့ ဦးဆောငျ၍ တကျသှားလသေညျ ။ ကြှနျုပျမှာ ပွောငျသဘာဝကို သိပွီး ဖွဈသညျ့ အလြောကျ ဇျောခြှေး မြား ပြံလာမိသညျ ။ ပွောငျမြားသညျ အနံ့ခံ ကောငျးသလောကျ သငျးကှဲ ( အုပျစုကှဲ ) ဆိုလြှငျ တှရေ့ာ ဂမူးရှူး ထိုး ရနျမူတတျပသေညျ ။ လညှောတှငျ ရှိသော သတ်တဝါကို အနံ့ခံအာရုံဖွငျ့ ခှဲခွားနိုငျစှမျး ရှိလသေညျ ။ တောငျကုနျးပျေါရှိ သဈပငျကွီးအောကျသို့ ရောကျမှသာလြှငျ ကြှနျုပျလညျး အသကျပွငျးပွငျး ရှူ နိုငျလသေညျ ။ ဒေါကျတာနိုငျဇျောမှာ ကြောကျရုပျတဈရုပျကဲ့သို့ ငွိမျသကျစှာ ဒူးထောကျထိုငျနပွေီး ပတျဝနျးကငျြကို အကဲ ခတျနသေညျ ။
ထိုအခိုကျ စောစောက ကြှနျုပျတို့ ရပျနခေဲ့သော နရောသို့ ပွောငျကွးက ဝငျလာနသေညျ ။ ဒေါကျတာ နိုငျဇျောသညျ တညျငွိမျစှာဖွငျ့ သနေတျကို ခြိနျလိုကျပွီး ပဈခလြိုကျလတေော့သညျ ။ ” ဒိုငျး “ ယမျးပေါကျကှဲသံကွီးကွောငျ့ တဈတောလုံးရှိ ကြေးငှကျမြား လနျ့ဖွနျ့ ပြံကုနျကွသညျ။ ထိုအခိုကျ ထူးဆနျးသော ဖွဈရပျကို မကျြဝါးထငျထငျ ကွုံရလတေော့သညျ ။ ယငျးမှာ ပွောငျကွီးသညျ ခကျြကောငျးကို ထိပါလြှကျနှငျ့ လဲမကြ သှားသညျ့အပွငျ ကြှနျုပျတို့ နှဈယောကျကို တှသှေ့ားပွီ ဖွဈ၍ တောငျကုနျးပျေါသို့ တဟုနျထိုး ပွေး တကျ လာလသေညျ ။ ကြှနျုပျလညျး အသကျမြှပငျ မရှုရဲပဲ မကွံတတျအောငျပငျ ဖွဈသှားလသေညျ ။ ပွောငျကွီးသညျ ကြှနျုပျတို့နှငျ့ တဖွညျးဖွညျး နီးလာပသေညျ ။ ထိုအခိုကျ ဒေါကျတာနိုငျဇျောကို ကွညျ့လိုကျရာ စိတျမပူသညျ့ အလား အေးအေးဆေးဆေးပငျ ထိုငျနလေသေညျ ။ ပွောငျကွီးကား ကြှနျုပျတို့ နှငျ့ သုံးကိုကျလောကျ အကှာတှငျ ဗုနျး ကနဲ လဲကသြှားပတေော့သညျ ။ ထိုအခါမှ ကြှနျုပျလညျး အသကျပွငျးပွငျး ရှူရဲလတေော့သညျ ။
ဒေါကျတာ နိုငျဇျောက ” ဒီလို ရှိတယျ ကိုသကျတနျ့ရ ပွောငျတှကေ သှေးနှေးသတ်တဝါတှထေဲမှာ နာကငျြမှုဒါဏျကို အခံနိုငျဆုံးနဲ့ ဒေါသအကွီးဆုံး အကောငျတှပေဲ စောစောက ကြှနျတျောပဈလိုကျတာက သူ့ရဲ့ လကျဖြံရိုးအောကျတညျ့တညျ့ပဲ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကို ရနျမူမှနျးသိတော့ ဒီကောငျတှကေ လတျတလောဒါဏျရာကို မသှေ့ားတယျဗြ ပွီးတော့ ရနျသူရှိ ရာကို ရနျပွုဖို့ ပွေးလာတယျ ။ ဒါပမေယျ့ နှလုံးကို ထိထားတဲ့ ဒါဏျနဲ့ ကုနျးတကျကွီးကို ဒငျး ငါးကိုကျ လောကျအပွငျ ပွေးမတတျနိုငျပါဘူးဗြာ “ ဟု ရှငျးပွလသေညျ ။ ထိုအခါမှ ကြှနျတျောလညျး ဒေါကျတာနိုငျဇျော၏ ဗဟုသုတ ကွှယျဝပုံတို့ကို အသိအ မှတျပွုရလတေော့သညျ ။ ကြှနျုပျတို့ နှဈဦးလညျး ပွောငျကွီးကို ဝါးလုံးဖွငျ့ လြှိုထမျး၍ ရှာသို့ ပွနျကာ ရှာသား မြားအား ခှဲဝပေေးလိုကျလတေော့သညျ ။
(၄) အကာလ ညအခြိနျမို့ လူခွကေ တိတျဆိတျနသေညျ ။ ထိုအခြိနျ ဝါးရုံတောကွီးနှငျ့ မလှမျးမကမျးရှိ သဈပငျကွီး တဈပငျကွီးတဈပငျပျေါတှငျ ဇှဲနဘဲကွီးစှာ စောငျ့ဆိုငျးနကွေသူ နှဈဦးကား ဒေါကျတာနိုငျဇျောနှငျ့ ကြှနျုပျပငျ ဖွဈ လေ သညျ ။ ကြှနျုပျတို့ကား ခွငျကိုကျလညျး မရိုကျရဲ အပေါ့အပါးလညျး မသှားရဲဘဲ ဝါးရုံတောသို့သာ စူးစိုကျ ကွညျ့နကွေရသညျ ။ နာရီပွနျ ၂ ခကျြထိုးသောအခါ လူမြားကလညျး ငိုကျမညျြးစပွုလာသညျ ။ ” ဆရာနိုငျဇျောရေ ဒီည သရဲက ခွောကျပါ့မလားဗြ” ” အငျးအသအေခြာတော့ မပွောနိုငျဘူးဗြ စောငျ့တော့ကွညျ့ရမှာပဲ “ ထိုအခိုကျ ” ဆရာ.. ဆရာ.. အဖကေ ညဉျ့နကျနပွေီဆိုလို့ ဆရာတို့ကို ချေါခိုငျးလိုကျလို့ ဆငျးလာပါဦး “ ဟု အျောသံကို ကွားရလသေညျ။ အောကျသို့ငုံ့ကွညျ့လိုကျသောအခါ ကြှနျုပျတို့ကို ဟငျးလာပေးသော သူကွီး သမီး ဖွဈနလေသေညျ ။ ကြှနျုပျက ပွနျပွောမညျအပွုတှငျ ဒေါကျတာနိုငျဇျောက ” ရှူးတိုးတိုး ဆရာ ဘာမှ ပွနျမပွောနဲ့ ကြှနျတျောနောကျမှရှငျးပွမယျ “ ဟုတညျငွိမျစှာ ပွောလသေညျ ။
သဈပငျအောကျမှ မိနျးကလေးကလညျး လေးငါးခါလောကျ အျောချေါလသေညျ ။ အတနျကွာသောအခါ ကြှနျုပျတို့ မဆငျးလာမှနျးသိသညျနှငျ့ ကြှနျုပျတို့နှဈဦးရှိရာသို့ စူးစူးစိုကျစိုကျ ကွညျ့ကာ အမှောငျ ထုထဲ ဝငျရောကျပြောကျကှယျသှားလသေညျ ။ ကြှနျုပျ၏ ရငျထဲတှငျ အေးခဲသော လကျကွီးနှငျ့ စှဲဆုပျ ထားဘိသကဲ့သို့ ခံစားလိုကျရလတေော့သညျ ။ ” ဒီလိုဆရာရဲ့ ဒီအခြိနျကွီးမှာ သူကွီးက သူ့သမီး မိနျးမပြိုလေးကို ကြှနျတျောတို့ နှဈယောကျတညျးရှိတဲ့ နရောကို လာချေါခိုငျးပါ့မလား စဉျးစားပါဦး နောကျပွီး ဆရာသတိထားမိလား ဒီမိနျးမက လုံးဝမကျြတောငျမခတျဘူးဗြို့ အမှနျတော့ ဒီလို တောတှမှော တောခွောကျတာတှေ နာနာဘာဝတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ ကြှနျတျောတို့ကို ရမလားလို့ လှညျ့စားတာပေါ့ဗြာ “ ဟုရှငျးပွလသေညျ ။
ထိုအခါမှ ကြှနျုပျလညျး ကွကျသီးထမိသှားသညျ ။ ဒေါကျတာ နိုငျဇျောမပါပဲ ကြှနျုပျ တဈယောကျတညျးသာဆိုလြှငျ ဆငျးသှားမိမှာ သခြောပသေညျ ။ ထိုအခိုကျ ဝါးရုံတောကွီးကား တဟီးဟီး မွညျ လာပွီး ယိမျးထိုးလာလသေညျ ။ ထူးဆနျးသညျမှာ ဘေးနားမှ သဈပငျမြားမှာ တုတျတုတျမြှ မလှုပျ ။ ဝါးရုံပငျမြားသာလြှငျ သှကျသှကျခါအောငျ လှုပျခါနခွေငျးဖွဈ၏ ။ ကြှနျုပျတို့နှဈဦးလညျး သရဲခွောကျခွငျးကို မယုံကွညျ သူမြား ဖွဈသျောလညျး ယခုအခါ မစဉျးစားတတျအောငျ ဖွဈရလေ၏ ။ နာရီဝကျခနျ့ လှုပျခါပွီးသောအခါ တ ဖွညျးဖွညျး ငွိမျသကျသှားလတေော့သညျ ။ ကြှနျုပျတို့လညျး ဆကျလကျ၍ ထူးခွားမှုမြား မရှိတော့သောအခါ အောကျ သို့ ဆငျးပွီး တညျးခိုရာ အိမျသို့ ပွနျခဲ့ကွလတေော့သညျ ။
နံနကျရောကျသောအခါ သူကွီးကို ညတုနျးက ကွုံခဲ့ရသညျမြားကို ပွနျ၍ ပွောပွလိုကျရာ သူကွီးဦးအေးမောငျမှာ လှနျစှာ ထိတျလနျ့အံ့သွလြှကျရှိပွီး သူကွီးသမီးမှာ အံ့သွနသေော အမူအယာ ရှိလသေညျ ။ သို့နှငျ့ ကြှနျုပျတို့ သူငယျ ခငျြး နှဈဦးလညျး မတှေးတတျအောငျပငျ ရှိနတေော့သညျ ။ ညတုနျးက အိပျရေးပကျြခဲ့သောကွောငျ့ ကြှနျုပျတို့ နှဈဦးလညျး တညျးခိုရာအိမျ သို့ ပွနျပွီး တရေးတမော အိပျစကျကွလသေညျ ။ ညနစေောငျး ငါးနာ ရီအခြိနျလောကျတှငျ လူပေါငျး ၁၀ယောကျ ခနျ့ပါသော လူအုပျကွီးသညျ ရှာလယျလမျးတလြောကျ ဖုနျ တဝုနျး ဝုနျး ရှိအောငျ သှားနကွေလသေညျ ။ ထိုလူအုပျကွီး အလယျတှငျ လှနျစှာ သှေးစုပျဖွူလြျောလြှကျရှိသော လူတဈဦးကို စောငျပုခကျအတှကျ သယျ ဆောငျလြှကျ ကြှနျုပျတို့ နှဈဦး တညျးခိုရာ နအေိမျအတှငျးသို့ ဝငျရောကျလာ ကွလသေညျ ။
ကြှနျုပျတို့လညျး အခွေ အနကေို မေးမွနျးကွညျ့ရာ
” ကယျပါဦး ဆရာရယျ ဒါက ကြှနျတျောတို့ရှာကို လာနကွေ ကုနျသညျကိုဘအေးပါ တဈလ တဈခါလောကျ လာ လရှေိ့ပါတယျ ဒီတဈခေါကျလာတာ ဝါးရုံတောကွီး နားအရောကျမှာ လဲကနြတောတှလေို့ ရှာသားတှကေ သယျ လာတာပါ ဆရာဝနျတှလေညျး ဒီမှာ ရှိတယျဆိုလို့ ကြှနျတျောတို့ သယျလာတာပါ “
သို့နှငျ့ ကြှနျုပျတို့လညျး လူနာကို စပျးသပျကွညျ့ရာ နှလုံးအားနညျးနသေညျက တဈကွောငျး ထိတျလနျ့စရာ တဈခုခုကို ရုတျတရကျတှလေို့ကျရ၍ သှေးလနျ့သှားခွငျးပငျ ဖွဈလသေညျ ။ လိုအပျသော ကုသမှုမြားပေးပွီး လူနာ ကို ကြှနျုပျတို့ နှဈဦးပငျ စောငျ့ကွညျ့လသေညျ ။ တဈနာရီခနျ့ကွာသောအခါ လူနာမှာ အတျောအတနျ ထူထူ ထောငျထောငျ ဖွဈလာလသေညျ ။
” ကဲဆိုစမျးပါဦးဗြ ဘာတှမြေား တှကွေုံ့ခဲ့ရလို့လဲ “
” ဒီလိုပါဆရာ ကြှနျတေျာ့နာမညျက ဘအေးပါ ကြှနျတျောက ဒီရှာကို တဈလတဈခါတော့ ကုနျရောငျးကုနျသညျ အ လုပျနဲ့ လာနကေပြါ အခုတဈခေါကျ မွို့ က ထှကျလာကတညျးက ဘာမှမစားလာမိဘူးဆရာ ဒါနဲ့ ရှာတောငျ ဖကျက တောစပျက ဝါးရုံတော အောကျမှာ ကြှနျတျောခဏနားပါတယျ ။ ပွီးတော့ကြှနျတျော ဗိုကျဆာလှနျးလို့ မွို့က ဝယျလာတဲ့ ခေါကျဆှဲခွောကျတှေ ပွုတျသောကျဖို့ ဝါးရုံပငျအောကျမှာ မီးမှေးပါတယျဆရာ အဲဒီလို မီး မှေးပွီး ဝါးနဲနဲလိုနလေို့ ကြှနျတျော ဝါးရုံတောအစပျက ဝါးပငျပေါကျလေးကို သှားနှုတျမိပါတယျ ။ နှုတျလိုကျ တဲ့အခါ အထဲက သှေးတှေ ပနျးထှကျလာပါတယျ ကြှနျတျောဖွငျ့ကွောကျလိုကျတာ လှနျပါရောဗြာ တောခွောကျ တာလား ဘာလားတော့ မသိပါဘူး ဗြာ “
ထိုသို့ ပွောလိုကျသောအခါ ဒေါကျတာ နိုငျဇျောက တဈစုံတဈခုကို စဉျးစားမိဟနျဖွငျ့ အားရဝမျးသာစှာ ” ကဲဒါဆို ကြှနျတျောတို့ကို အဲဒီ သှေးတှထှေကျတဲ့ နရော လိုကျပို့နိုငျမလားဗြာ ကြှနျတေျာ့မှာ သနေတျလညျး ပါ ပါတယျ “ ” ဟုတျကဲ့ ကြှနျတျောလိုကျပို့ပေးပါ့မယျ “ သို့ဖွငျ့ ကိုဘအေး ၊ ဒေါကျတာ နိုငျဇျော ၊ ကြှနျုပျနှငျ့ ရှာသား သုံးလေးယောကျတို့ ရှာ တောငျဖကျသို့ ထှကျလာခဲ့ကွပတေော့သညျ ။
(၅) ဝါးရုံတောကွီး အလယျတညျ့တညျ့ ကြှနျုပျတို့ ရိုးမတော ထဲ ဝငျသော အစပျနားလောကျတှငျ သှေးကှကျကွီးကို ထငျထငျ ရှားရှား မွငျလိုကျရပသေညျ ။ သှေးမြားကား ဝါးပငျနှုတျသော နရောမှ ထှကျနဆေဲပငျ ရှိသေးသညျ ။ ရှာသား မြားကား သို့လော သို့လောနှငျ့ အလှနျပငျ ထိတျလနျ့တုနျလှုပျလိုကျရှိပသေညျ ။ ဒေါကျတာနိုငျဇျောကား မှိုရသော မကျြနှာကဲ့သို့ အထူးပငျ ဝမျးသာလြှကျ ရှိပသေညျ ။ ” ဘယျ့နှယျ့တုနျး ကိုနိုငျဇျောရ ပွုံးလှခညျြလား “ ” ဟဲဟဲ ပွုံးဆို အဖွကေို ကြှနျတျောသိပွီဗြ ဒါပမေယျ့ ကြိနျးသအေောငျတော့ ကိုသကျတနျ့ရယျ ကြှနျတျောရယျ ဒီည စမျးသပျမှု တဈခု လုပျရလိမျ့မယျ “ ” ဟုတျလား ကြှနျတျောဖွငျ့မ စဉျးစားတတျအောငျပါပဲ ဗြာ “ ” ညရောကျရငျ ဒီသရဲ ဆိုတာကို ခငျဗြား မကျြမွငျတှရေ့ပါစမေ့ယျ ဗြာ…ဟားဟားဟား “ ဒေါကျတာနိုငျဇျောကို ကွညျ့ရငျး ကြှနျုပျလညျး အတျောပငျ စိတျအားတတျသှားမိလသေညျ ။
သို့နှငျ့…. ဝါးရုံတောကွီးကား အပျကသြံပငျ ကွားရလောကျအောငျ တိတျဆိတျငွိမျသကျနလေသေညျ ။ ဟိုနားဒီနား ဖကျြကနဲ တှလေို့ကျရသော အရိပျမြားကား ကြှနျုပျကို ခွောကျလှနျ့လကျြရှိသညျ ။ နလေ့ညျက တှခေဲ့သော သှေး ကှကျ မြားကား ခွောကျလြှကျ ရှိပသေညျ ။ ” ကြှနျတျောယူခိုငျးလိုကျတာတှေ ပါရဲ့လား ကိုသကျတနျ့ “ ” ပါ ပါတယျဗြာ ဒီမှာ ရော့ “ ဒေါကျတာနိုငျဇျောကြှနျုပျကို ယူဆောငျခိုငျးသော ပစ်စညျးမြားမှာ ကောကျရိုးခွောကျ အနညျးငယျနှငျ့ မီးခွဈပငျ ဖွဈပေ သညျ ။ ထို့နောကျ ဒေါကျတာ နိုငျဇျောသညျ ဝါးရုံတော အောကျခွတှေငျ မီးပုံတဈခုကို ဖိုလသေညျ ။ ထိုသို့ ဖိုပွီး မကွာခငျမှာပငျ ဝါးရုံတောကွီးကား သှကျသှကျခါအောငျ လှုပျယမျးလာလသေညျ ။ အခွားသဈပငျမြားကား မလှုပျပေ ။ ဝါးပငျမြားသာလြှငျ တဈစုံတဈဦးက လှုပျယမျးနသေကဲ့သို့ လှုပျခါနခွေငျးဖွဈသညျ ။
အတနျကွာသောအခါ ဒေါကျတာ နိုငျဇျောက မီးပုံကို ငွိမျးသတျပဈလိုကျလသေညျ ။ ထိုအခါ ဝါးရုံတောကွီးကား တဈစတဈစ ပွနျလညျ ငွိမျသကျသှားလတေော့သညျ ။ “ ဘယျလို ဖွဈတာတုနျး ကိုနိုငျဇျောရ ကြှနျတျောတော့ ဘာမှကို မစဉျးစားတတျတော့ဘူး “ ” ခငျဗြားကို အဖွမေပွောခငျ နောကျတဈခု ပွအုနျးမယျဗြ လာ “ ဟုဆိုကာ ဝါးရုံတော အစပျရှိ ဝါးပငျမြားရှိရာသို့ ဦးတညျလြောကျသှားလသေညျ ။
ဒေါကျတာ နိုငျဇျောသညျ ဝါးအသေးပငျတဈပငျကို ဆတျကနဲ နှုတျယူလိုကျလသေညျ ။ ထိုအခါ ဝါးရုံတောကွီးမှာ စော စောကကဲ့သို့ လှုပျရှားယိမျးထိုးလာလသေညျ ။ ထို့ထကျ အံ့သွဖှယျကောငျးသညျမှာ ဝါးနှုတျလိုကျသော နေ ရာမှ သှေးမြားပနျးထှကျလာခွငျးပငျ ဇွဈသညျ ။ နာ ရီဝကျခနျ့ ကွာသောအ ခါမှသာလြှငျ ပွနျလညျ တညျငွိမျ သှား လတေော့သညျ ။
” ဘယျလို ဖွဈတာတုနျးကို နိုငျဇျောရ ဒီဝါးရုံတောက အသကျမြား ရှိနလေား “
” ဝါးရုံတောကတော့ အသကျဘယျရှိမလဲဗြာ ဝါးရုံတော အောကျခွမှော အသကျရှိတဲ့အ ကောငျရှိနလေို့ပေါ့ “
” ဗြာ ဘယျ..ဘယျလို “ ” ဒီလိုဗြ ဆရာ ကွားဖူးလား မသိဘူး ရှေးနှဈပေါငျးမြားစှာ က သတ်တဝါကွီးတှဟော အလှနျ အမငျးကွီး ထှားခဲ့ကွတယျ ဒါကွောငျ့ ကုနျးမှာ မွှပှေေး ရမှော ငရှေး ဆိုပွီး အဆိုရှိခဲ့ကွတယျဗြ ရထေဲမှာဆို ငရှေးဆိုတဲ့ ငါး ဟာ အကွီးဆုံးပဲ သူပွီးမှ ညံ သတ်တဝါတှကေ အကွီးဆုံးပဲ မွကွေီးထဲမှာ ဆိုရငျ ကုနျးနသေတ်တဝါတှထေဲမှာ ဆိုရငျပေါ့ ဗြာ မွှပှေေးက အကွီးဆုံးပဲဗြ ဒီကောငျတှကေ အစာစားပွီးတာနဲ့ တဈနရောရာမှာ နှဈနဲ့ ခြီပွီး ငွိမျငွိမျ လေး နနေလေေ့ ရှိတယျဗြ ရာသီဥတုတှပွေောငျးတော့ သူတို့ကိုယျပျေါမှာ လဒေါဏျမိုးဒါဏျနဲ့ အလကြေ့ အပငျတှေ ပေါကျလာတယျ မြှဈစို့လေးတှေ လညျးပေါကျလာပွီး နောကျပိုငျးကွီးလာတဲ့အခါ သူတို့ ကိုယျက အသား တှကေို ဖောကျပွီး ဝါးရုံပငျတှပေေါကျလာတယျ ဒါပမေယျ့လညျး ဒီကောငျတှကေ ငွိမျနတေော့ မသိသာ ဘူးပေါ့ ဒါပမေယျ့ ဝါးရုံပငျကို နှုတျလိုကျတဲ့အခါ သူတို့ ကိုယျပျေါက အသားတှကေို ဆှဲနှုတျသလို ဖွဈပွီး သှေး တှေ ထှကျလာတာပဲဗြို့ ပွီးတော့ သူတို့ ကိုယျပျေါကိုမီးမှေးတော့ အပူဒါဏျကွောငျ့ မွှကွေီး လှုပျရှား လိုကျတဲ့အခါ သူ့ကိုယျပျေါမှာ အမွဈတှယျနတေဲ့ ဝါးရုံတောကွီးပါ လိုကျပွီး လှုပျလာတာပေါ့ဗြာ “ ” အျော.. လတျစသတျတော့ ဒီလိုကိုး ဒါဆို သူတို့ ခေါငျးကရောဗြာ “ ” ခေါငျးကတော့ တောတှငျးတဈနရောမှာ ရှိမှာပေါ့ဗြာ “ ” အျော…” သို့နှငျ့ ကြှနျုပျရငျထဲက ပုစ်ဆာလညျးဒေါကျတာ နိုငျဇျော အဖွကွေောငျ့ ရှငျးလငျးသှားရလတေော့သညျ ။
(၆) နောကျတဈနေ့ နံနကျတှငျ ရှာသားမြားအား သူကွီးအိမျတှငျ စုနစေပွေီး အဖွကေို ပွောပွလိုကျလသေညျ ။ ရှာသား မြားမှာ အံ့သွလှနျး၍ မကျြတောငျပငျ မခတျကွပေ ။ ပွီးနောကျ ” တျောသေးတာပေါ့ ဆရာရယျ ဆရာတို့လို ဗဟုသုတကွှယျဝလူမို့သာပေါ့ ကြှနျတျောတို့ ဖွငျ့ သရဲ ခွောကျ တယျပဲ ထငျနတောဗြာ ဒါနဲ့ ဒီမွှကွေီးကို ဘယျလို လုပျရမလဲဗြာ “ ” ဒီလို ရှိတယျဗြာ ဒီကောငျကွီး ငွိမျနတေုနျးတော့ အကွောငျးမဟုတျဘူးဗြ ဒါပမေယျ့ အခြိနျတနျလို့ ဗိုကျဆာလို့ လှုပျရှား လိုကျရငျဒီရှာကလေးလညျး ပကျြသှားနိုငျတယျ ဒီတော့ ဒီကောငျကွီးကို ရှငျးပဈရမယျဗြာ ရှငျးရမယျ့ နညျးလမျးကတော့ အခု ဒီရှာရဲ့ ဘေးက ခမာ တောငျခွမှော ရထားလမျးဖောကျဖို့ တောငျတှေ ဖွိုနကွေတယျ ။ သူတို့ကို အကူအညီတောငျးပွီး ဒီကောငျကွီးကို မိုငျးနဲ့ ရှငျးပဈရမှာပဲ “ ” အေးဗြာ ဆရာရဲ့ အကွံကတော့ အကောငျးဆုံးပဲ ဒီကောငျကွီးက သူ့ဘာသာနတေဲ့အတှကျ ရကျစကျရာ ကပြမေယျ့ မတတျနိုငျဘူးလေ တခြိနျလူတှေ ဒုက်ခမရောကျဖို့အတှကျ ရှငျးပဈရမှာပဲ ဆရာရေ “ ဒီလိုနဲ့ ရှာသူကွီး ဦးအေးမောငျ နဲ့ ရပျရှာလူကွီးမြား ၊ ကြှနျုပျတို့ နှဈဦး ပေါငျးပွီး မိုငျးလုပျသားမြားကို သှား၍ အကူ အညီတောငျးကွလသေညျ ။ ရထားလမျးအလုပျသမားမြားကလညျး အထကျလူကွီးကို တငျပွပွီး အကူအညီပေးလသေညျ ။ သို့နှငျ့ သကျကယျ သောငျရှာ ကလေးတှငျ ရှာသူရှာသားမြားအား ထိတျလနျ့တုနျလှုပျစခေဲ့သော မွှကွေီးအား မိုငျးခှဲ၍ ရှငျးပဈ လိုကျလတေော့သညျ ။ ကြှနျုပျတို့ နှဈဦး၏ စိတျထဲတှငျကား သူ့ဘာသာနသေော မွှကွေီးအား တမငျတကာ သတျဖွတျလိုကျရခွငျး ဖွဈသျောလညျး နောငျတဈခြိနျ ရှာသူရှာသူမြား၏ အသကျပေါငျးမြားစှာနှငျ့ ပတျသညျ နသေညျဖွဈသောကွောငျ့ သာ သတျဖွတျရခွငျး ဖွဈသညျမို့ စိတျမကောငျးခွငျးကွီးစှာ ဖွဈရလတေော့သတညျး ။
Credit: မွနျမာ သရဲဇာတျလမျးမြားနှငျ့ ထူးဆနျးအံ့ဖှယျဇာတျလမျးမြား စုစညျးမှု